ခပ္လန္းလန္းဖက္ရွင္မ်ားနဲ႕ ညိဳ႕ခ်က္ျပင္းလြန္းေနတဲ့ ေရႊကစ္ – Zeekwat Hot News
ခပ္လန္းလန္းဖက္ရွင္မ်ားနဲ႕ ညိဳ႕ခ်က္ျပင္းလြန္းေနတဲ့ ေရႊကစ္
May 17, 20190323
LUSH Magazine ရဲ႕ Cover Story အတြက္ ဓာတ္ပံုရိုက္ေပးခဲ့တဲ့ ေရႊကစ္ရဲ႕ အထာက်တဲ့ စတုိင္မ်ားေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားအားလံုး ေငးေၾကာင္မွင္သက္သြားရပါတယ္။ ပံုမွန္ျမင္ေနက် ပံုစံထက္ ကြဲထြက္တဲ့ ဖက္ရွင္နဲ႕စတိုင္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊကစ္တစ္ေယာက္ အေျပာင္းလဲၾကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။
သူမပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ‘My Country My Home ဇာတိေျမ’ ဇာတ္ကားၾကီးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ OKINAWA ၿမိဳ႕ရဲ႕ (၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပတဲ့ OKINAWA International Movie Festivalမွာ ပါ၀င္ျပသႏိုင္ခဲ့တယ္လို႕ ေရႊကစ္က ေျပာျပခဲ့ရာမွာ ပရိသတ္မ်ားက ဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
LUSH Magazine ရဲ့ Cover Story အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ရွှေကစ်ရဲ့ အထာကျတဲ့ စတိုင်များကြောင့် ပရိသတ်များအားလုံး ငေးကြောင်မှင်သက်သွားရပါတယ်။ ပုံမှန်မြင်နေကျ ပုံစံထက် ကွဲထွက်တဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်များကြောင့် ရွှေကစ်တစ်ယောက် အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သိပ်မကြာခင်ကပဲ ရွှေကစ်တစ်ယောက် ဂျပန်နိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရွှေကစ်အတွက် ပြည်ပခရီးစဉ်လေးဖြစ်ခဲ့ပြီး အစားအသောက်များကို စားရင်း ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက သိပ်လှတဲ့ ဖူဂျီတောင်ကြီးနဲ့အတူ ချစ်စဖွယ်ကောင်းအောင် ပို့စ်လေးတွေပေးရင်း ရွှေကစ်တစ်ယောက် အတော်လေး အေးချမ်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိစဉ်ကာလပတ်လုံး လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ နေရာဒေသများကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ တောက်လျှောက်မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရက်ကြာရောက်နေတဲ့ ရွှေကစ်တစ်ယောက် အရင်ကထက် ပိုလှလာတယ်လို့ ပရိသတ်များက ထင်စမှတ်ပြုကြပါတယ်။သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ‘My Country My Home ဇာတိမြေ’ ဇာတ်ကားကြီးက ဂျပန်နိုင်ငံ OKINAWA မြို့ရဲ့ (၁၁) ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ OKINAWA International Movie Festivalမှာ ပါဝင်ပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရွှေကစ်က ပြောပြခဲ့ရာမှာ ပရိသတ်များက ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို အားတက်သရော ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင်နေပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများ၊ ကြော်ငြာများနဲ့ ပွဲအခမ်းအနားများကို တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လို့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ အချစ်ရေးမှာ အလွန်တည်ငြိမ်နေခဲ့ပြီး သူမရဲ့အချစ်ရေးအကြောင်း ပရိသတ်များကို အသိပေးထားတာမျိုးလည်း မရှိသေးပါဘူး။
ပဲေလ့စ္ အသင္းနဲ႔ အတူ ထြန္းေတာက္လာတဲ့ ကစားသမား ၂ဦးကုိ မ်က္စိက်လာျပီး ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား သုံးဖြယ္ ရွိေနတဲ့ ယူနုိက္တက္
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဝင္ခြင့္ရတဲ့ အသင္းတစ္သင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ လုိေနလုိတဲ့ လုိ႔ သူရဲ႕ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ကုိ ဖြင့္ဟလာတဲ့ ဇာဟာ
Hey Buddy!, I found this information for you: "ခပ္လန္းလန္းဖက္ရွင္မ်ားနဲ႕ ညိဳ႕ခ်က္ျပင္းလြန္းေနတဲ့ ေရႊကစ္". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/879. Thank you.